Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo Maanta Goobo Muhiim ah Booqday (SAWIRO) – SBC
Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo Maanta Goobo Muhiim ah Booqday (SAWIRO)
Boosaaso-Madaxweyne ku xigeenka Puntland C.samad Cali Shire & Wefdi Wasiiro ah oo la socda ayaa manta waxaa ay ku mareen Socdaal ah kormeero & Kala warqaadasho Dekada & Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Boosaaso.
Gen.C/samad Cali shire ayaa waxaa uu kulan guud la qaatay Maamulka Gobolka & kan degmada oo uu ka dhageystay warbixino ku aadan Xaalada Gobolka & Tan Degmada Boosaaso.
Wefdiga Madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa manta waxaa Kormeerkii ugu horeeyay ku tageen Dekada Weyn ee Magaalada Boosaaso Waxaana halkasi ku soo dhaweeyay Masuuliyiinta wasaarada kuwaasi oo warbixino kala duwan wefidga ku siiyay Gudaha Dekada Magaalada Boosaaso oo uu dhaqdhaqaaq Ganacsi oo balaaran xilligan ka socdo.
Madaxweyne ku xigeenka & Masuuliyiinta la socday ayaa ka mahadceliyay Soo dhaweynta Balaaran ee ay u sameeyeen masuuliyiinta Dekada Boosaaso oo ay la kulmeen
Masuuliyiinta Garoonka Diyaaradaha Garoonka ayaa waxaa uu madaxweyne ku xigeenka ku amaanay Dadaalka ay garoonka ka sameeyeen Mudadii ay Maamulka hayeen isagana ka mahadceliyay Soo dhaweynta ay u sameeyeen Masuuliyiinta Garoonka & Wasiirka Duulista Hawada ee Puntland.
Kormeerka shaqo ee Madaxweyne ku xigeenka manta waxaa ku weheliyay Masuuliyiinta Maamulka Gobolka C/xaafid Cali Yuusuf & Masuuliyiin kale oo ka mid ah golaha Xukuumada Puntland.